URene Descartes wayengumfilosofi waseFransi obizwa ngokuba ngu "umsunguli" wexesha lemihla yefilosofi ngenxa yokuba wayenomngeni kwaye wayibuza zonke iinkqubo zemveli zokucinga, ezininzi zazo ezazisungulwa kwiingcamango zikaAristotle . U-Rene Descartes 'waphathwa ngengcinga yefilosofi njengenxalenye yezinye iindawo ezifana nezibalo kunye nesayensi.
Izahlulo zazalwa ngoMatshi 31, 1596, eTouine, eFransi waza wafa: ngoFebhuwari 11, 1650, eStockholm, eSweden.
Ngomhla kaNovemba 10, 1619: I-Descartes yafumana uluhlu lwephupha eliphambili elimisela kwimishini yokuphuhlisa inkqubo entsha yesayensi kunye nefilosofi.
Iincwadi ezibalulekileyo zikaRene Descartes
Ukucamngca kwi-Philosophy yokuqala (1641)
Ingxoxo ngeNdlela (1637)
Imigaqo yefilosofi (1644)
Iintlanganiso zomphefumlo (1649)
"Akwanele ukuba ube nengqondo efanelekileyo. Into ephambili kukusebenzisa kakuhle."
Sogito Ergo Sum. "Ndicinga, ngoko ndilapha."
Ukuqonda iCodeesian System
Nangona iRene Descartes idla ngokubizwa ngokuba yingcali yefilosofi, yapapasha imisebenzi emininzi kwimathematika ecacileyo nakwizenzululwazi njenge-optics. Ukholo lukholelwa ekubumbeni kolwazi lonke kunye nendawo yesifundo somntu. Wafanisa ifilosofi emthini: iingcambu zi-metaphysics, i-trunk physics, kunye namasebe ngamanye amazwe njengamashishini. Yonke into iyaxhunyiwe kwaye yonke into ixhomekeke kwisiseko sefilosofi esifanelekileyo, kodwa "isiqhamo" sivela kumasebe enzululwazi.
URene Descartes wazalelwa eFransi kwidolophu encinane kufuphi neTours ebizwa ngokuba nguye emva kwakhe. Waye kwisikolo sama-Jesuit apho wayefunda khona i-rhetoric, incwadi kunye nefilosofi. Wayenomgangatho osemthethweni kodwa wakhula umnqweno weemathematika kuba wayibona njengensimi enye apho kufumaneke ukuqinisekiswa okuqinisekileyo.
Kwakhona wabona njengendlela yokufumana inkqubela enkulu kwizinto zesayensi kunye nefilosofi.
Ngaba uRene Unqabile Ukungaqiniseki Konke?
URene Descartes waqonda ukuba izinto ezininzi awayezithatha ixesha elide azizange zithembeke, ngoko wazimisela ukuphuhlisa inkqubo entsha yefilosofi ngokungathandabuzeki konke. Kwinkqubo yokucwangcisa ngendlela efanelekileyo yonke into ecingelwayo, wayekholelwa ukuba ufumene esinye isiluleko esingenakuqinisekiswa: ubukho bakhe. Isenzo nje sokungabaza esilungelelanisa into eyayinokungabaza. Esi siphakamiso sichazwa ngokunyanisekileyo cogito, sum sum: Ndicinga, ngoko ndilapha.
Rene Descartes kunye nefilosofi
Iinjongo ze-Descartes kwakungekho nje ukwenza igalelo kumzimba ophezulu kunye nangaphezulu kodwa kunokuba uguqule ngokupheleleyo ifilosofi ukusuka kumhlaba. I-Descartes icinga ukuba, ngokwenza njalo, angakwazi ukwakha iingcamango zakhe ngendlela echanekileyo nangokwengqiqo kunokuba ukuba wanezela nje kwizinto ezenziwe ngaphambili ngabanye.
Ngenxa yokuba i-Descartes yagqiba ukuba wayekhona ngokwenene, waphinda wagqiba ekubeni kukho ubuncinci bokuba sinokuthi sinokuyazi: ukuba thina, njengezifundo ezizimeleyo, zikhona njengezizathu zokucinga. Kule nto azama ukusekela nantoni na into ngenxa yokuba nayiphi na ifilosofi ekhuselekile kufuneka ibe nayo, njengento ebalulekileyo, iqalo lokuqala elikhuselekileyo.
Ukusuka apha uqhubeka nokuzama ukufaka ubungqina benkulunkulu kunye nezinye izinto acinga ukuba unako ukuzenza.
I-Quotes ka-Albert Einstein Ukukhanyela Ukukholelwa KuThixo Obuqu
Ziziphi iipilisi zeMithayo?
Incwadi ebhaliweyo yokubhala: Ukuqulunqwa kwetalela yokuvuma
Au Fur et à Mesure - Inkcazo yesiFrentshi ichazwa
Yintoni enokuyilindela kwiNcedisi yoTitshala
I-Anglo-Saxon neViking Queens yaseNgilani
Amasiko, iMveli kunye neNdlela zokubhiyozela iBabon, i-Autumn Equinox
Iimfundiso zeMathematika ezibalulekileyo zabathengi
Ukudlala njani umdlalo weBhola amathathu